Ukulethwa - ISUYI IMPORT KANYE NOKUTHUTHELISA CO., LTD
Ukulethwa kwezimpahla kusuka eChina kuye eRussia, Kazakhstan, Ukraine, Belarus
Sizibandakanya kwezokuthuthwa kwezinhlobo ezahlukahlukene eziya emazweni e-CIS. Noma ngabe ukuphi, sicela uxhumane nathi! Sizohambisa ngokushesha izimpahla ezivela eChina
intengo kusuka ku-15 $ / kg
intengo kusuka ku-8 $ / kg
intengo yokubhuka engaphelele
kusuka ku-1.5 $ / kg
isitsha esisodwa noma ingxenye
intengo kusuka ku-1 $ / kuya
Veza kusuka eChina uye eRussia
Futhi, lolu hlobo lwezokuthutha lufanelekile ezitolo eziku-inthanethi, ezinemakhaphu ephezulu kakhulu yezimpahla futhi azidingi ukusetha indawo yokugcina impahla eRussia. Kungakapheli izinsuku eziyi-1-3 kungenzeka ukwamukela izimpahla eMoscow bese uzithumela ngokushesha ngokulethwa kwezithunywa kumakhasimende kulo lonke elaseRussia. Akudingekile nakancane ukuba khona mathupha eMoscow ukuthola izimpahla, ngoba sizodlulisela i-oda ngqo ekulethweni kwezithunywa futhi sikhombise umamukeli womthengi wezimpahla zakho. Ukulethwa kwe-Express osukwini olungu-1 kungukulethwa okusheshayo kusuka eChina kuye eMoscow
Ukulethwa kwenziwa eMoscow, bese sithumela imithwalo yenkampani yezokuthutha eRussia noma sisebenzise izinsizakalo zekhuriya, ngokuya ngesikhathi sokulethwa esidingekayo.
Izindleko zokulethwa okuvela eChina ziye eRussia ziqala ku- $ 10 nge-1kg ngayinye. Lapho kubalwa izindleko zokulethwa, isisindo somthwalo siqoqelwa kwinani lonke lamakhilogremu. Inkampani yethu ihambisa izimpahla zanoma yisiphi isisindo.
Ngeshwa, akuyona yonke imithwalo engathuthwa ngokulethwa okuvela eChina. Amabhethri, ama-accumulators - anqunyelwe ukuhanjiswa, kanye nemishini equkethe amabhethri anamandla. Okuhlukile ngamabhethri amancane kumadivayisi, ukulethwa kwempahla enjalo kufanele kuvunyelwane kusengaphambili (ngokwesibonelo, ama-video recorders, amakhamera, amaphilisi nezingcingo). Akuvunyelwe futhi ukuthutha izilwane, izitshalo kanye nezinye izimpahla ezingavunyelwe ukuthuthwa komoya. Kunemikhawulo ngosayizi wezimpahla - ngokubonisana, xhumana nenkampani yethu futhi sizokutshela ngokuningiliziwe ngokulethwa okucacile futhi ubale izindleko.
Ngezimpahla ezinkulu futhi ezinkulu, ungasebenzisa ukulethwa kwethu okusheshayo kwe-Air kusuka eChina noma ukulethwa kweCargo
Ukulethwa okucacile kwezimpahla ezivela eChina kuyinkimbinkimbi yezenzo ezihambisanayo,
okubandakanya imisebenzi elandelayo
izimpahla endlini yokugcina impahla
Inkokhelo ngemuva kokubeletha
Ukulandwa okuvela endlini yokugcina impahla
kunoma isiphi isifunda saseRussia
Ukulethwa komoya kusuka eChina kuya eRussia
Ukulethwa komoya kusuka eChina kuyadingeka ukuhanjiswa okusheshayo kwempahla kuya eRussia.
Sithumela izimpahla zisuka eMoscow ngosuku lokufika sisebenzisa izinkampani zezokuthutha zaseRussia.Ungathola izindleko zokulethwa ngokusithumela isicelo.
Impahla yomoya evela eChina ilungele imithwalo emincane ephuthumayo, imithwalo yecala noma ukugcwaliswa okusheshayo kwempahla. Ukulethwa okunjalo kusetshenziselwa nezimpahla ezintekenteke kakhulu futhi ezibizayo.
Kulula kakhulu ukusebenzisa ukulethwa komoya lapho ingxenye yezimpahla idingeka ngokuphuthumayo. Kumakhasimende amaningi, ukulethwa okunjalo kusiza ekugcwaliseni masisha amasheya angenalutho agcinwa, kepha athumela ingxenye encane kuphela yezimpahla ngokuhamba ngomoya okonga, ingxenye enkulu asebevele besebenzisa ukulethwa kwemithwalo evela eChina noma ukuthuthwa kwezitimela - ngakho-ke kulondolozwa okubalulekile kutholakala ekulethweni
Lapho kufika umthwalo lapho kugcinwa khona izimpahla zethu, ngokwesicelo seklayenti, singahlukanisa lo mthwalo ube yizingxenye eziningana bese siwuthumela ngezinhlobo ezahlukahlukene zokulethwa ngokuya ngezifiso zeklayenti.
kusuka kumphakeli noma
endlini yethu yokugcina eChina
kanye nokugcinwa endaweni yokugcina impahla
Ukulethwa kwezimpahla kusuka eChina kuye eRussia
Ukulethwa kwezimpahla ezivela eChina kuyindlela ejwayelekile futhi efakazelwe yokulethwa kwezimpahla ezivela eChina ziye eRussia. Ubuhle bokuthuthwa kweCargo ukuthi kuyindlela elula futhi esheshayo yokuletha izimpahla. Lapho izimpahla zilethwa zivela eChina, impahla iyasulwa ngokohlelo olwenziwe lula, oluqeda inani elikhulu lezinkinga ngemibhalo.
Ngokuyinhloko, ukulethwa kwempahla kusetshenziswa osomabhizinisi abaziphathela izimpahla noma ukuthengisa kabusha. Imvamisa le ndlela yokuhamba isetshenziswa izinkampani ezinkulu, ngoba azidingi ngaso sonke isikhathi isiqukathi esigcwele semithwalo. Ngemininingwane eminingi mayelana nezici zokulethwa kwezimpahla ezivela eChina ziye eRussia, udinga ukuxhumana nenkampani yethu. Sizokutshela ama-nuances wokukhokha kubaphakeli baseChina nokuthengwa kwezimpahla eChina ezinhlanganweni ezisemthethweni nakubantu ngabanye, imininingwane yokulungiselela ukuvala imibhalo yezimpahla, sizokweluleka ngokwenziwa kwezitifiketi nokumenyezelwa kokuvumelana.
Futhi singanikela ngokulethwa okuvela e-China ngokuvunyelwa okuphelele kwamasiko (ukulethwa ngokusemthethweni kwezimpahla ezivela e-China) - ukuthunyelwa kweziqukathi noma ukulethwa kwempahla yeqembu evela eChina.
Ukulethwa kwezimpahla ezivela eChina ngesitimela
Ukulethwa okuvela eChina ngesitimela kungenye yezinhlobo ezithandwa kakhulu zokuthuthwa kwempahla. Kunezinketho eziningi zezikhombisi-ndlela nezindawo zokuvunyelwa kwamasiko ezimpahla.
Ngakho-ke, kungenzeka ukhethe indlela efanelekayo yesicelo seklayenti ngalinye, elizokwanelisa zombili imigomo nezindleko zokulethwa.
Ukulethwa kwezimpahla zeziqukathi ngesitimela kusuka eChina kuyindlela enenzuzo enkulu yokuhambisa iCargo isuka eChina isiya eRussia. Isikhathi sokuthumela, kucatshangelwa ukususwa kwamasiko, sisuka ezinsukwini ezingama-30 kuye kwezingu-40. Ukuvunyelwa kwamasiko kungenziwa eKazakhstan noma eRiphabhlikhi yaseBelarus, sizokubala inketho evumelana kakhulu nawe ngokwenani lentengo nesikhathi. Ukuze ubale izindleko, thumela uhlelo lokusebenza. Lolu hlobo lokulethwa kwempahla oluvela eChina luzinzile ngokwesikhathi - okusho uhlobo lokuhamba oluqinisekisiwe noluthembekile.
Ngaphezu kwakho konke, ukulethwa kwezitimela zemithwalo ezivela eChina ngeBelarus kuyadingeka. Ngemuva kokudlula kokuvunyelwa kwamasiko eMinsk, umthwalo uthunyelwa endlini yokugcina iklayenti eRussia.
Izimpahla zeqembu nazo zingahanjiswa ngesitimela. Kungenzeka ukulethwa kweCargo kwemithwalo yeqembu kanye nokulethwa kwemithwalo yeqembu enemvume egcwele yamasiko.
Ukuvikelwa kwempahla kusukela ekulimaleni. Sizobeka kabusha izimpahla emabhokisini omhlinzeki sizifake emabhokisini ethu angongqimba abathathu. Sizoqinisa amabhokisi ngamakhona aqinisayo. Izimpahla uzozithola zisesimeni esithengiswayo.
Umshwalense wezimpahla. Sizoqinisekisa umthwalo wakho. Sinesikhwama sethu somshwalense esizokhokha kuso isinxephezelo uma kwenzeka isimo esingalindelekile. Awuzibeki engcupheni uma usebenza nathi.
Ukuhlanganiswa kwempahla eMoscow nasemasikweni. Sabala izindleko zokulethwa kusengaphambili sazifaka emalini ekhokhwayo. Yini intengo ebekiwe esivumelwaneni - sizoba nenhlanhla ngale ntengo.